पतञ्जलिद्वारा आग्रीडाँडाका २३ घरपरिवारलाई खाद्यान्न उपलब्ध - नेपालबहस
पतञ्जलिद्वारा आग्रीडाँडाका २३ घरपरिवारलाई खाद्यान्न उपलब्ध
| १२:३१:३६ मा प्रकाशित
२ कार्तिक, वालिङ । पतञ्जलिले वालिङ ८ आग्रीडाँडाका २३ घरपरिवारलाई दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न उपलब्ध गराएको छ । आयूर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्णको निर्देशनमा आफ्नो जन्म ठाउँमा दशैंको उपहारस्वरुप दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न उपलब्ध गराईएको हो ।
खाद्यान्न हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै वालिङ नगर प्रमुख दिलीपप्रताप खाँणले आचार्यजीको सहयोगमा सिङ्गो गाउँका लागि खाद्यान्न सहयोग प्राप्त भएको बताए । उनले नेपालीहरुको महान चाड दशैंको अवसरमा २३ घर परिवारलाई दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न उपलब्ध गराएर सहयोग गरेकोमा धन्यवाद पतञ्जलीलाई धन्यवाद दिए । उनले दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउने परिवारका लागि पतञ्जलीले खाद्यान्न उपलब्ध गराएर राहत पु¥याएको बताए ।
कार्यक्रममा वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष कमलप्रसाद सुबेदीले आचार्य बालकृष्णले आफ्नो जन्मभूमिप्रति देखाएको सहयोगी भावना अझै बढ्दै गई आगामी दिनमा पनि सहयोगहरु प्राप्त भईरहने विश्वास ब्यक्त गरे । कार्यक्रममा पतञ्जलि आयूर्वेद केन्द्र प्रालि नेपालका निर्देशक डा. पवमान सुबेदीले पतञ्जलीले उपलब्ध गराएको सहयोगलाई स्वीकार गरेकोमा नगरपालिकासहित आग्रीडाँडाका स्थानीयहरुमा धन्यवाद ब्यक्त दिए ।
पतञ्जलिले आग्रीडाँडाका २३ घरपरिवारलाई १० केजी चामल, दाल, नुन, तेल, चिनी, चियापत्ति, घ्यू, दुधलगायतका दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न उपलब्ध गराएको हो । पतञ्जलिले गत सोमबार पनि पतञ्जलिले वालिङ ११ का ६० घर परिवारलाई दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न उपलब्ध गराएको थियो ।
वालिङ नगरपालिकाको ध्यान उत्पादकत्व बढाउनमा केन्द्रित छ : नगर प्रमुख खाँण । २ दिन पहिले
वालिङको बातावारण सुहाउदो उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गरौं, दीगो आर्थिक बिकास सम्भव छ ! ३ दिन पहिले
लागतका आधारमा दुधको मुल्य नपाएकाे दुग्ध उत्पादक कृषकहरुको गुनासो १ हप्ता पहिले
लिमीका १८० घरधुरीका लागि ३०० क्विन्टल चामल पठाइयो २ हप्ता पहिले
कृषकहरुले हात ठड्याउदै भने:- हामी उत्पादन गर्छौं, बजारको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो २ हप्ता पहिले
आईपीएलमा मुम्बईमाथि राजस्थानको सानदार जित २० घण्टा पहिले
शुक्लफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा जङ्गल सफारी खुला ७ दिन पहिले
लाचार ओली सरकार ६ दिन पहिले
कक्षा १२ को परीक्षामा संक्रमित विद्यार्थीलाई अलग्गै राखिने ५ दिन पहिले
कोरोना बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स चालकलाई थप प्रोत्साहन भत्ता ७ दिन पहिले
बत्ती बलेपछि स्थानीयवासीको खुशी : दशैँमा गाउँ उज्यालो २ दिन पहिले
हिउँदे अधिवेशन प्रादेशिक राजधानी देउखुरीमा राख्नेबारे गृहकार्य शुरु ३ दिन पहिले
कैलालीका चार बालबालिका बाबु खोज्दै जुम्ला ४ हप्ता पहिले
नेकपाको सचिवालय बैठक निष्कर्षविहिन, कार्यविभाजनको टुंगो लगाउन बिहीबार बैठक बस्ने ! १ वर्ष पहिले
काेराेना असर : कुखुराको मासुको मूल्य घट्यो, कृषक प्रत्यक्ष मारमा २ महिना पहिले
समाचार सङ्कलनका लागि गएका पत्रकार प्रहरी हिरासतमा ६ महिना पहिले